नबिलको दुर्घटना बीमा योजनामा बीमा रकम १० लाख उपलब्ध हुने - Arthakoartha.com - Arthakoartha.com
नबिलको दुर्घटना बीमा योजनामा बीमा रकम १० लाख उपलब्ध हुने
काठमाडौं, १७ भदौ । नबिल बैंक लिमिटेडले व्यक्तिगत बचत खाताका ग्राहकहरुलाई १० लाख रुपैयाँको सामुहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना ल्याएको छ । यो योजना भादौ १छ गतेदेखि नै लागु हुने गरी बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल खनाल र एन.एल.जी. बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लभ पन्तबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
उक्त योजना अन्तर्गत दैनिक मौज्दात ५ हजार रुपैयाँ वा सो भन्दाबढि राख्ने जुनसुकै प्रकारका व्यक्तिगत बचत खातावालाहरुलाई १० लाख रुपैयाँको सामुहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । यस योजनाअन्तर्गत बचतकर्ताको दुर्घटनाद्वारा मृत्यु भएमा अथवा स्थायी पूर्ण असक्तता भएमा एकमुष्ठ १० लाख रुपैयाँ बीमा रकम प्रदान गरिने बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बैंकले विगतदेखिनै ग्राहकहरुलाई व्यक्तिगत बचत खातामा १३ घातक रोगहरुको बीमा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल बैंकले ७९ शाखा कार्यालय, १ सय द्धण् एटीएम र १ हजार ५ सयभन्दा बढि नबिल रेमिट एजेन्टहरुमार्फत् सेवा दिँदै आएको छ ।
चाडपर्वमुखी अनुगमनले बजारमा प्रभाव परेको चेम्बरको निष्कर्ष
अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा के छ ? कस्तो बन्ला आगामी बजेट
नाट्टा सुदुरपश्चिम प्रदेशको छैटौ साधारण सभा सम्पन्न
लकडाउन असर : उपत्यकामा दूध विक्री ८० प्रतिशत घट्यो